कथा/लेख | Dhruva’s Creations
Category Archives: कथा/लेख
Posted on May 6, 2020 by Dhruva's Creations
रातको एघार बजी सकेको थियो, र ११.५ मा अन्तिम ट्रेन थियो उसको रुटको, नत्र फेरी दुइवटा ट्रेन फेरेर जानुपर्ने बाध्यता थियो। एकैस्वासमा उ स्टेसन पुगेर ट्रेन चड्ने लाइनमा खडा भयो, हतार हतार मा उ झन्डै एकजना केटिसित ठोकिन पुग्यो, हदबडीमा उसले सोसियल डिस्टेन्स समेत भुलेर अघि बढेको थियो । उसलाई त्यस केटिले कर्के नजरले सांकेतिक नजरलेनै तिरस्कृत तरिकाले हेरी र
Posted on March 17, 2019 by Dhruva's Creations
कथा साहित्य : पेसाले उ डाक्टर हो , तर सेवा भावनाले हेर्ने हो भने उ एकदमै कर्मठ समाज सेवी हो। उसले बनाएका वा सौजन्य प्राप्त नेपालका दुर्गम जिल्लाहरुमा दर्जनौ स्कुलहरु, स्वस्थ केन्द्रहरु अहिले पनि संचालित छन्। तर अमेरिकामै रहेका हजारौ नेपाली संघ सस्थाहरुमा नउसको कुनै नाम छ नकुनै लोकप्रियता । हो उसले गर्न नचाहेको भने अवस्य होइन। तर उसको ब्यस्त
Posted on February 21, 2019 by Dhruva's Creations
कथा साहित्य म उसको नाम सित परिचित भएको धेरै भएको छैन यस्तै तीन चार वर्ष हुनुपर्छ, तर भेट भने आज सम्म भएको छैन। तर विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकातिर उसको नाम कहिले कविताको दाहिनेतिर त कहिले लेख रचना र गजलका पुच्छरमा देख्छु । हुन त हाम्रोमा यस्तो नियमित निस्कने साहित्यक पत्रिका पनि कति होलान र ? जम्मै पत्र पत्रिका राजनितिक मुखपत्र
Posted on February 11, 2019 by Dhruva's Creations
२०७५ माघ २८ गते विधा : कथा साहित्य सुनिल मस्त निन्द्रामा सुति रहेको थियो अचनाक फोनको रिङ्ग टोनले उसलाई झस्कायो , नेपालबाट पो हो की एति बिहानै ? निन्द्रैमा फोन उठाएर बोल्छ, “हल्लो को हो ?” “हल्लो मित्र मेरो इमेल पायौ ? अह हेरेको छुइन राति अबेर कामबाट आएर सुतेको अहिले ओछ्यानमै छु।” के छ भनन हेर्ने पर्दैन नि तिमीले